Falanqaynta xaaladda horumarka suuqa ee warshadaha soo saaraya shandadaha sannadka 2020
Waxaa dhaqaajinaya horumarka dhaqaalaha adduunka iyo baahida suuqyada, warshadaha bagaashka dalkayga ayaa si xawli leh u horumaray tobankii sano ee la soo dhaafay, iyo baahida sii kordheysa ee suuqyada ayaa keentay in inta badan shirkadaha bagaashka ay ku socdaan wadada horumarka degdegga ah. Marka laga eego qaabka ganacsiga, lugta gudaha ...
Sidee loo helaa oraah sax ah mashruucaaga boorsada?
Macaamiil badan oo raadinaya warshadaha boorsada gacanta ayaa rajeynaya inay helaan oraahyo sax ah sida ugu dhakhsaha badan uguna macquulsan boorsooyinkooda gaarka ah ee ay sameeyeen. Si kastaba ha noqotee, sababo kala duwan awgood, way ku adag tahay soo-saareyaasha inay ku siiyaan oraah aad u sax ah iyadoon muunad ama shandado faahfaahin laga helin. Xaqiiqdii, waxaa jira hab lagu helo ...
Maxay wax soo saarka boorsada gaarka ahi u leedahay “MOQ”?
Waxaan rumaysanahay in qof kastaa la kulmi doono dhibaatada amarka ugu yar marka la raadinayo soosaarayaasha si ay u habeeyaan boorsooyinka dhabarka. Maxay warshad kastaa u leedahay shuruudaha MOQ, maxayse tahay tirada ugu macquulsan ee ugu yar ee warshadaynta bacaha? Tirada ugu yar ee dalabka ah ...
Faham habka wax soo saarka boorsada daqiiqad gudaheed
Marka laga hadlayo habka wax soo saarka ee boorsooyinka dhabarka, dad badan ayaa laga yaabaa inay u maleeyaan in habka wax soo saarka ee boorsooyinka iyo dharka ay isku mid yihiin, ka dib, mashiinnada harqaanka ayaa loo isticmaalaa labadaba. Xaqiiqdii, fikradani waa khalad. Farqi weyn ayaa u dhexeeya nidaamka boorsada dhabarka iyo dharka. In wada ...
Shandado LOGO la farsameeyay oo boorsada ku jirta
Habka daabacaadda LOGO ee ku habboonaanta boorsada waa dhibaato soo noqnoqota. Si loo xoojiyo dhaqanka shirkadaha loona muujiyo muuqaalka shirkadda, daabacaadda LOGO waa mid aad muhiim u ah. Gaar ahaan, nashqadaha shirkadaha qaar ayaa aad u adag una baahan in la fuliyo ...